Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ကာဘူလ်မြို.လယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၊လူ(၅)ယောက်သေဆုံးပြီး (၇၀)ကျော်ဒဏ်ရာရ၊
မနက်ပိုင်း ၉နာရီ၁၅မိနစ်လောက်တွင်တာလီဘန်တို.၏စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ.အာဖဂန်နစ္စတန်မြို.လယ်၊ကာဘူလ်တွင်ဝင် ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်၊တာလီဘန်တပ်ဖွဲ.ဝင်ဝင်ချင်းမှာပင် ဗုံလေလုံးထက်မနည်းဖောက်ခွဲပြီးလက်နက်သံများဖြင့်စတင်ပစ် ခတ်ခဲ့ပါသည်၊စတင်ဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာ အာဖဂန်သမ္မတ ဟာမစ်ကာဇိုင်း၏ဝန်ကြီးအဖွဲ.(၁၄)ယောက်တို.တာဝန်ထမ်းဆောင်သစ္စာကြိမ် ဆိုပွဲပြုလုပ်မည့်အချိန်နဲ.တိုက်ဆိုင်နေပါသည်၊
တာလီဘန်တပ်ဖွဲ.အင်းအား အယောက်(၂၀)ဟာ သမ္မတ၏နန်းတော်၊ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရုံ၊တရားရေးရုံ၊ဆီရီနားဟိုတယ်နှင့် အာဖန်ဂန်ဈေးကြီးအနီးအနာတစ်ဝိုက်တွင်ဝင်ရောင်နေရာယူလှုပ်ရှားခဲ့သည်၊အစိုးရတပ်ဖွဲ.နှင့်တာလီဘန်တပ်ဖွဲ.တွေအကြာ အချင်းချင်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာ အချိန် ၂ နာရီနှင့် ၄၅ မိနစ်ကြာသွားပြီးနောက် အာဖ၈န်အစိုးရရဲနှစ်ယောက်နှင့်အမျိုးသားလုံခြုံရေး အရာရှိတစ်ယောက်အပါအဝင် (၅)ယောက်သေဆုံးသွားပြီး (၇၀)ကျော်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အထဲမှာ ရဲနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ.(၃၆) ယောက်ပါဝင်သည်ဟုပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှမိုဟာမက် ဟနစ်အက်မာ Mohamed Hanif Atmar ကသတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင်ပြောဆိုသွားပါသည်၊
တာလီဘန်ဘက်ကသေဆုံးဦးရေနှင့်ပတ်သက်၍အငြင်းပွားနေဆဲဖြစ်သည်၊အာဖဂန်အစိုးရကတော့၊တာလီဘန်တပ်ဖွဲ.၏အ လောင်(၇)ယောက်ရှာဖွေတွေ.ရှိတယ်လို.အစိုးရဘက်ကပြောနေပေမဲ့တာလီဘန်ဘက်ကတော့သူတို.ဘက်က(၅)ယောက် သာသေဆုံးတယ်လို.ဆိုပါသည်၊အစိုးရဘက်က အယောက်(၃၀)သေဆုံးပြီး လူထု(၃၁)ယောက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို.တာလီ ဘန်တို.ဘက်ကငြင်းခုံပြောဆိုပါသည်၊ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဒီတိုက်ပွဲဟာ အာဖဂန်အစိုးရတပ်ဖွဲ.ဘက်ကအကြီးအကျယ်နစ်နာပြီးစစ် ခုခံနိုင်ရန်အတွက်နေတိုတပ်ဖွဲ.တွေဝင်ရောက်ကူညီရသည်၊နေတိုတပ်ဖွဲ.(၃)ယောက်ထက်မနဲလည်းဒီိတိုက်ပွဲအတွင်းဒဏ်ရာရရှိသွားသ ည်ဟုသိရှိရပါသည်၊